केदार घिमिरे : जसलाई सरकारले लखेटी–लखेटी कलाकार बनायो – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/केदार घिमिरे : जसलाई सरकारले लखेटी–लखेटी कलाकार बनायो
केदारले खाक्सी घोट्ने काम गरे । पैसा एकदमै कम । त्यसपछि बालुवा बोके । दिनभर बोक्दा अरुले ७० रुपैयाँ पाउँथे, केदारले ६५ । ज्यान सानो भएकाले ठेकेदारले पैसा घटाइदियो । त्यसपछि साइकलमा बोकेर मसला बेच्न थाले । लगनखेलमा नाङ्लो पसल गरे ।
चैत्र २८, २०७६गोकर्ण गौतम
त्यही आशको डोरीमा बाँधिएर बुबाआमाले भविष्यवेत्ता ज्योतिषलाई केदारको हात देखाए।ज्योतिषीले ठोकुवा गरे– यो फुच्चे कलाकार बन्छ !
सरकारले? त्यो पनि लेखेटेर, कसरी? त्यसका लागि केदारसँग सुनाउनु पर्ने कथाको चाङ छ।२०४९ सालमा केदारले एलएलसी पास गरे। क्याम्पस पढ्न काठमाडौं जाने तयारी गर्दै थिए घर आगलागी भयो। घरमात्र जलेन, जग्गापास गर्न ठीक्क पारेको ९६ हजार रुपैयाँ पैसा पनि जल्यो। अर्थात्, घिमिरे परिवारको सपना खरानी भयो। अब पढ्नलाई काठमाडौं जाने पैसासमेत भएन।त्यतिबेला उनलाई लागेको थियो– जीन्दगी यहीं सकियो।
आज (शुक्रबार) लकडाउनका बीच केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बुढो आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेका छन्। जवानीमै बुढोको उपनामले चर्चित भएका केदारको जीवनलाई हेर्दा लाग्छ– दुखको मेसिनमा धेरै नै पेलिएपछि मान्छेले हाँसोको महत्व बुझ्छ। ससाना खुशीहरुको अर्थ थाहा पाउँछ।
कोरोनाका कारण किर्तिपुरका विकास महर्जनको मृ-त्यु
क्वारेन्टाईनबाटै २२ वर्षिया महिला परपुरुषसँग पाेईला भागिन् ! ३ दिनसम्म हिंडेर आउँदा बाटाेमै परेको थियो लभ, रुँदै बताईन् दिदीले, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..